Japana: ny ampitan’ny hadivory na hiserasera sa tsia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Janoary 2008 15:06 GMT
Vakio amin'ny teny عربي, Deutsch, 日本語, Español, English
Anivon’ny famahoahan’ny serasera, mety hiteny ny olona iray fa mizara roa izao tontolo izao: Izay manam-pifandraisana sy izay tsy manam-pifandraisana amin’ny aterineto. Raha mandray anjara sy mifanabe anaty kolontsaina (“iraisana”) mivoatra mampiavaka azy manokana ny vitsy an’isa mpiserasera nefa tsy mitsaha-mitombo dia tsy (manana kolontsaina iraisana) kosa ny maro an’isa tsy mpiserasera.
Izay “hantsana”( noraisiko hoe “hadivory” izy eto) manelanelana ireo tontolo roa izay no lohahevitry ny mpanabolongana essa ao amin’nyUncategorizable Blog. Nanontany i Essa hoe: Ahoana moa ny mety ho eritreritry ny olona iray tsy mpiserasera ny tontolon’ny mpampiasa aterineto? Ao amin’ny lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Ampitan’ny hatsana” (キャズムの向こう側), dia misy tolo-mpamelabelarana tahaka izao:
Mieritreritra aho fa tao amin’ny boky nosoratan’i Gould no misy soratra hoe tsy ny olona no endrika, na amin’ny lafiny inona na amin’ny lafiny inona, entina ijerena ny fiainana an-tany, fa ny fiainan’ny bakteria. Voasoratra ao amin’io boky io fa amin’ny resaka habetsaky ny mponina, na filaharan’ny trano, na fahabetsahan’ny karazana – izay ifantenana ny mahasolo tena – na ny taova (marosela) aza tsy mety anaovana izany, fa ny olona irery ihany no anaovana izany.
Na izany aza ny sela (tokana) dia tsy mahay mamantatra taova (sela maro). Rehefa mahita taova ny sela iray, tsy ilay taova no hitany fa ny sela tsirairay mandrafitra ny taova. Mety hieritreritra tahaka izao ny sela hoe: “Hita fa misy fahasamihafana ny anatin’ireo sela ireo nefa tsy diso ny fitenenana azy ireo ho sela sahala amin-tsika ihany.” Tsy hitan’ny sela akory ny fifampiankinan’ny sela mandrafitra ny taova, na dia metyho hitany aza ny fahasamihafana, ary tsy hainy ny manavaka ny “izy ireo” amin'ny “isika”.
Raha mamaky boky momba ny fibaikoana alika ianao, dia matetika ho vakianao izao soratra manaraka izao fa [tsy maintsy]: “ataon’ny alika takany fa ny tompony dia ambony laharana kokoa noho izy.” Mora mirona (na entin’ny filany) araka ny fomba fifandraisana misy ambaratonga ao amin’ny fiaraha-monin’alika manko ny alika, koa raha mivadika ny fisainany ka mieritreritra izy fa ambony laharana amin’ny fifandraisana dia hihetsika araka izay mahamitarika azy izay ny alika. Koa raha mitranga izany, amin’ny fanatrehana toe-javatra iray dia ilay alika (amin’ny mahaambony laharana azy) no handray ny fanapahan-kevitra rehetra amin’ny vondrona misy azy. Mazava loatra fa tsy ny filana no hitarika ny olona hanatrehana araka tokony ho izy ny toe-javatra iray; amin’ny ankapobeny rehefa taitra ny alika dia mivovo sy manaikitra no fanaony.
Na dia miara-miaina aza ny olona sy ny alika, tsy hahita izay fahasamihafana eo amin’ny olona sy ny alika ny alika, fa ny fomba famantarany dia miankina amin’ny fanamboloana sy ny dingam-pifandraisana ihany.
Ikeda Kiyohiko [Mpampianatra momba ny zava-miaina ao amin’ny Anjerimanontolon’i Waseda] no manazava hoe ny fivoaran’ny fiainana tsy fiovana avy amin’ny rafitra iray mankany amin’ny rafitra iray vaovao hafa, fa eo amin’ny fivorana tahaka ity dia avela amin’izao ny rafitra teo aloha, fa ajoro eo amboniny, ny ambaratonga hafa.
Na izany aza, tsy ny rehetra no hiampita ny hantsana; tahaka ny hoe misy lavaka izany manelanelana ny olona miampita ny hantsana ary manangana rafitra vaovao eny ampita sy ireo manohy ny fiainany hatramin’izay ary tsy te-hanova na inona na inona.
Dia ahoana izany no ijeren’ny andanin’ny hadivory ny ankilany, heverin’izy ireo fa olombelona tratran’ny fiofoana (avy amin’ny teny miofo milaza ny bibbintsaonjo miofo ho lolo) mbola mitovitovy aminy ihany izy ireo, mpikambana ao amin’ny fiaraha-monina itovitovizana, mihinana sakafo itovitovizana, samy mitondra fiara ihany, mampiasa vola itovitovizana, voafehin’ny rafi-piaraha-monina itovitovizana. Na dia toy izany aza ny fijeriny dia ilay olona teo ihany no hitany.
Na izany aza, hahita zava-baovao tanteraka ireo miampita ny hantsana , hahita dingan-drafitra hafa ary dia ao no hiainany.
Rehefa tafakatra amin’ny dingana (tokonam-baravarana) iray ny isan’ny mponina miserasera amin’ny aterineto miohatra amin’ny mponina manerana izao tontolo izao, na dia tsy voatery hiampita tsy amin’antony ny hantsana aza ny rehetra, (satria) mbola ho maro an’isa hatrany ny tsy mampiasa ny fitaovam-baovao (radio, televiziona…). Hisy vondrona mahaleo tena haka toerana amin’izay, ary dia hisy tontolo vaovao (hiforona sy) hiasa.
Mety ho samy miaina amin’ny tontolony (tsy mifandray) ny olona miaina sy ny olona tsy miaina amin’io tontolo io.